Faah-Faahin: Kulmadii Dhex-maray Dhinacyada Puntland iyo Gal-Mudug – Radio Daljir
Faah-Faahin: Kulmadii Dhex-maray Dhinacyada Puntland iyo Gal-Mudug
Diseembar 5, 2015 9:53 b 0
Somalia, December 05, 2015-(Daljir)_ Madaxada Puntland iyo Gal-Mudug ayaa magalada Gaalkacyo ku sameeyay caasumaado nabadeed kuwaasoo dabo socda shirarkii nabadda looga wada hadlayay ee labada dhinac u dhaxeeyay.
Madaxwaynaha Gal-Mudug mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa saakadii hore Quraac xaafada Baraxley ugu sameeyay madaxwaynaha Puntland,madaxwaynaha Jubbaland, Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo masuuliyiin kale, halkaasoo ay labada dhinac madaxdii ka socotay isku xog waraysteen.
Sidoo kale waxaa marti qaadka Gal-Mudug qayb ka ahaa culimadda labada dhinac oo mar kasta wadey wacyi galin iyo waxay diinta Islaamku ka qabto in nabadda laga shaqeeyo.
Wasiirka koowaad ee dalka Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke ayaa tilaabo wanaagsan ku tilmaamay in labada madaxwayne ay shacabka tusaan inuu dhaqan galay heshiiskii afarta qodob ee la wada gaaray.
Dhinaca kale madaxwaynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa hoygiisa oo ku yaala waqooyiga magalada Gaalkacyo Qado sharafeey ugu sameeyay dhigiisa Galmudug iyo masuuliyiin kale oo mamulkiisa ka tirsan.